Faahfaahin Dagaal ka dhacay Maanta Muqdisho oo sababay Khasaare. – Hornafrik Media Network
Faahfaahin Dagaal ka dhacay Maanta Muqdisho oo sababay Khasaare.
By HornAfrik	 On Sep 16, 2017
Xaaladda Degmadda Dayniile oo ay Saaka ku dagaalameen Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Somalia ayaa dagan, iyadoona la kala qaaday Ciidamaddii halkaasi ku dagaalamay.
Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciidan ka tirsan Milatariga Soomaaliya iyo Ciidanka Xasilinta ayaa saakay ka bilaawday Fariisamo ay mudo dheer daganaayeen qaar ka mid ah Milatariga Soomaaliya, waxaana la isku adeegsaday Hubka Fudud iyo kan Culus.
Sida Xiligii dagaaladii Muqdisho oo kale ayaa saakay mar quro dadka reer muqdisho ku baraa-rugeen rasaas culus oo dhaceysa iyo gaadiidka dagaalka oo ka qeyb qaadanaya dagaalkaasi, waxaana jirtay hub culus oo ku dhacayay meelo ka baxsan goobaha lagu dagaalamay.
Barqadii maanta ayaa mar kale dib la isugu soo laabtay dagaalka, kadib markii ciidan dheeraad ah oo Gurmad ah ay kala heleen Dhinacyadii dagaalamaya.
Saraakiisha Xoogga dalka ee ku sugan goobihii lagu dagaalamay ayaa sheegay in dagaalka uu salka ku haayo amar ciidanka lagu siiyay in ay ka guuraan xeryihii ay daganaayeen oo ah guryihii hore ee Ciidanka Soomaaliya, waxa uuna amar kaas qeyb ka yahay amaro lagu soo rogay dhamaan ciidanka iyo shacabka dagan guriyihii ciidanka Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho.
Waxaa jirtay gudi ay magacaawday Wasaaradda Gaashaan-dhigga Soomaaliya oo la yiraahdo Gudiga dib u soo celinta Hantida Ciidanka, iyadoona amarkaan sababay Dagaalka uu ka soo baxay Guddigaasi.
Ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen, in kabadan 10 kalane ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. Waxayna Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay u badan yihiin Dad Shacab ah. iyadoo sidoo kale uu jiro Khasaare soo kala gaaray Ciidamaddii dagaalamayay.
Taliyaha Ciidanka Xoogga, Gen Axmad Jimcaale Cirfiid iyo Saraakiil la socota ayaa gaaray Goobaha lagu dagaalamay, Waxayna ku guulaysteen inay kala qaadaan Ciidamaddii dagaalku dhex maray,iyadoo haatana ay wadahadal kula jiraan Saraakiishii Ciidanka Xoogga ee lagu weeraray Goobaha ay ku sugnaayeen.
Dagaalo u dhaxeeya Ciidamadda ka wada tirsan Dowladda Somalia ayaa marar badan ka dhacay Muqdisho iyo Goboladda Dalka, Balse Dagaalkan Saaka waxa uu ahaa kii ugu xoogganaa ee Muqdisho ka dhaca Mudooyinkan.
Cusboonaysiin:Al-Shabaab oo ka baxay degmada Ceel-waaq oo ay saakay qabsadeen.
Dadkii u ololaynayay Qadiyadda Qalbidhagax oo la amray in la soo xiro.